राजेश हमालले विहे गर्ने पक्का | दुनियाँ
दर्शनका कुरा एक हदसम्म सही छन्, जसले मलाई विवाह आवश्यक होइन भन्ने बुझायो, तर नारायण गोपालको यो गीत दर्शनभन्दा पनि यथार्थ रहेछ भन्ने अहिले आएर बुझें। जीवनको एउटा कालखण्डमा आएर मैले महसुस गरे, विवाह र जीवनसाथीको महत्व— हमालले एक साप्ताहिकलाई विशेष जानकारी दिने क्रममा भने।
'राजेश हमालले अब विवाह गर्दैछ, यो कुरा लगभग तय भैसकेको छ।' उनले आफूले विवाह गर्ने मुड बनाएको विषयमा पहिलो पटक औपचारिक कुराकानी गर्दै साप्ताहिकसँग भने- 'अधिकतम डेढ वर्षभित्र मेरो विवाह हुनेछ।' विवाहका लागि उपयुक्त बधू पाइसकेको बताउँदै नायक हमालले विवाहको औपचारिक घोषणा केही समयभित्रै गर्ने जानकारी दिए। राजेशले भने- 'विवाहको घोषणा भएको अधिकतम छ-सात महिनाभित्र विवाह गर्नेछु।'
केही दिनअघि एक कार्यक्रममा अभिनेता सुनिल थापाले अक्टुबरमा राजेश हमालले विवाह गर्ने बताएको कुरा सुनाएका थिए। सुनिलका अनुसार 'सप्राइज भन्दै राजेशले अक्टुबरमा विवाह गर्ने कुरा सुनाएका थिए,' तर राजेशले त्यति छिटो विवाह गर्ने योजना नभएको बताए। राजेशले भने- 'विवाह गर्नका लागि हाम्रो प्रेम अलिक परिपक्व भैसकेको छैन कि जस्तो लाग्छ। परिपक्व भएको महशुस गरेपछि हामी विवाह गर्नेछौं।'
पहिलेजस्तो एक-दुई वर्षपछि विवाह गर्छु भन्ने जस्तो कुरा गरेको होइन, यो वास्तविकता हो, अहिले मेरो मस्तिष्कमै विवाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेको छ। मेरो उमेर भैसक्यो, तर उनको अझै उमेर बाँकी छ, त्यसैले हतार गरेर पछुताउने पक्षमा म छैन, उनले भने। आफ्नो पक्षबाट विवाह गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको भए पनि हतारमा निर्णय लिँदा भविष्यमा वैवाहिक सम्बन्ध सुखद नहुने हो कि भनेर ढिलाइ गरेको राजेशले बताए।
राजेश हमालकी दुलही बन्ने सौभाग्य कसले पाउने भइन् त ? राजेश एकछिन मौन रहे, उनको परिचय बताउने बेला पनि अलिक भएको छैन कि ? उनले भने- 'उनी चलचित्र क्षेत्रभन्दा बाहिरकी युवती हुन्, अहिलेलाई यति मात्र भनौं।'
विवाह गर्ने निर्णयमा राजेश हमाल कसरी पुगे ? राजेशका अनुसार जीवनको एउटा मोडमा आइपुग्दा आफ्नो नजिकको आफन्त भनिएका दिदी, भाइलगायत परिवारका सदस्यहरूको आ-आफ्नै संसार हुने रहेछ, घनिष्ठता वा एकअर्कामा प्रिय भए पनि उनीहरूले आफ्नै न्युक्लियर फ्यामिलीमा चल्नुपर्ने बाध्यताले हमाललाई विवाहको आवश्यकता महसुस भयो। राजेशले भने- 'मन मिलेको परिवार भए पनि सबै आ-आफ्नै ध्याउन्नमा हुने भएकाले मैले पनि आफ्नो छुट्टै संसार बसाउन चाहे।'
मामा, फुपू आदिसँग भनेर विवाहका लागि युवती खोज्ने सोच पनि आएन, अहिलेसम्मको जीवन पुर्ण सन्तुष्टिका साथ बिताएको बताउँदै राजेशले भने- 'मैले, २०, ३०, ४० को दशक आफ्नै ढंगले पूर्ण रमाइलोका साथ जीवन बिताए, अब ५०, ६०, ७० को दशक पनि सोही ढंगले बिताउने योजना हो, त्यही अनुरूप अहिले आएर विवाहको निर्णय लिएको हुँ।
राजधानीकै शिक्षित परिवारकी युवती राजेश हमालकी अर्धाङ्गिनी बन्दैछिन्। नायक हमालका अनुसार उनीहरूको प्रेम चलेको पनि दुइ वर्ष बितिसकेको छ। सजातीय क्षेत्री परिवारकी ती युवती हाल औपचारिक अध्ययनमा व्यस्त छिन्। प्रेमिका अध्ययनमै व्यस्त भएकाले पनि विवाह गरिहाल्ने स्थिति नभएको हमालले बताए। केही वर्षअघि एउटा ग्यादरिङमा भेट भएका राजेश तथा उनकी प्रेमिकालाई निरन्तरको भेट र सम्पर्कले नजिक्याएको हो। हामीले एक-अर्कालाई बुझिसकेपछि, एक अर्काको टाइप मिल्ने देख्यौं, नायक हमालले भने- 'वास्तवमा उनलाई मैले आफ्नो जीवनसाथी बन्न लायक पाएँ।'
दूध बल्ल दहीको स्वरूप लिएर जम्न थालेको छ। यसलाई हल्लाइदियो भने नजम्न सक्छ, उनले भने- जमिसकेको छैन, तर दही बन्ने प्रक्रिया लगभग पूरा भैसकेको छ। राजेशको प्रेमसम्बन्ध उनकै भाषामा पि्रम्याचोर्ड जस्तो छ, त्यसैले गर्लफ्रेन्डका बारेमा अहिले नै विस्तृत बताउन अफ्ठयारो छ। आफूभन्दा लगभग आधा उमेर नै कान्छी युवतीसँग राजेशले विवाह गर्ने भएका छन्, २५ वर्षीया आफ्नी गर्लफ्रेन्ड र आफ्नो सोच भने मिल्दो भएको उनी बताउँछन्। राजेश भन्छन्- 'म पानी तातो चिसो नजाँची हात हाल्ने मानिस होइन।' चलचित्र 'चिनिकम' मा जस्तो अमिताभले मन पराएकी तब्बुका पिता अमिताभभन्दा कान्छो भएको अवस्था त छैन भन्ने प्रश्नमा राजेशले हाँस्दै भने- 'हैन यार, त्यस्तो छैन।'
सहयोगीहरूको साथमा लाजिम्पाटस्थित निवासमा बस्दै आएका नायक हमाल सहयोगीहरू भए पनि पारिवारिक पक्ष चाहिन्छ भन्ने कुराले पनि विवाहको सोच आएको बताउँछन्। मानिसको सोचाइ समयअनुसार परिवर्तन हुने रहेछ, उनले भने- 'त्यसको परिणाम स्वरूप नै मैले विवाहको बाटो रोजेको हुँ।'
साभार : साप्ताहीक